बुद्धको पाईला जसले ॐ: लेखेर सेयर गर्छ उसको मनोकामना पुरा हुनेछ ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /Entertainment/बुद्धको पाईला जसले ॐ: लेखेर सेयर गर्छ उसको मनोकामना पुरा हुनेछ !
काठमाडौँ । जन्म दिन कसरि मनाउने रु आफ्नी आमालाई ढोग्ने अरुकी आमालाई नमस्कारगर्ने हाम्रो संस्किर्ती हो । आमालाई पहिलोसम्मान दिनु हिन्दु धर्मको बिशेषता हो । आमा बन्न,जिम्मेवारी र दाईत्व पुरा गर्न गाह्रो छ । सबैको ॠणतिर्न सकिन्छ तर आमाको सकिदैन । अरुसंग लियका बस्तु फिर्ता गरेर ॠण तिर्न सकिन्छ तर आमाले जस्तो गर्भमा धारण गरेर दुध पिलायर स्याहार संम्भार बालक को सबै दु:ख सुख को साथ समर्पण गरि संसार चिनायको गुन तिर्न सकिदैन ।
त्यसकारण हिन्दुधर्मालम्बीहरुले पर्त्यक बैशाख औशी (माता तिर्थ औंसी ) र आफ्नो जन्मदिनमा आमालाई विशेस पुजाआजा गरि श्रदाभक्ति सहित उपहार दिन्छन । आमाले दुइ सन्तान जन्मायर मातातिर्थऔंसी बाहेकै दुइ पटक आमा बनेको पिडालाई भुल्ने अवसर पाउछिन । आमाका जति छोरा छोरी छन् उति उतिनै पटक उनले आमा बनेको गौरब र गर्वलाई आत्मसाथ गर्न पाउछिन्रआमा शब्द उच्चारण गर्दा, सुन्दा जति सुन्दर र आनन्द लाग्छ त्यसको गरिमा र महिमा पनि त्यतिनै अपार छ । आमा हुदाका कष्ट सब्दमा बयान गर्न सकिदैन । यं मातापितरौ क्लेशं सहेते सम्भवे नृणाम् । न तस्य निष्कृतिस्शक्या कर्तु वर्षशतैरपि ।
आमा बुवालाई बालक जन्माउन एवम पालन पोषण गर्नमा जति क्लेश (दर्द ) सहनुपर्छ त्यसको ॠण चुक्ता गर्नका लागि बालकले संयौ बर्स सेवा गरेपनि तिर्न सक्दैनौ । जनि प्रादुभावे धातुबाट जन्म सब्दको निर्माण हुन्छ । जायते इति जन्म अर्थात आकार,स्वरुपमा आउनु वा प्राप्त हुनुलाई जन्म भनिन्छ । जसमा जन्माउन सक्ने सक्तिछ त्यसलाई जननी वा आमा भनिन्छ । आकाशलाई बुबा र पिर्थ्बीलाई आमा भनिन्छ । आमाले नै कृष्ण,राम,बुद्द्लाई जन्मायकिहुन। त्यसकारण जन्म दिनमा पहिले आमालाई पुजा गर्नु पर्दछ । जति चुनौती उति नै उपलब्धि आमाले जति संधर्ष,पिडा सहनु पर्छ त्यसको पर्तिफल उतिनै धेरै छ विवेकी छोराछोरीका लागि ।
बच्चा जन्माउदा आमा जीवन-मरणका बिचमा उभियकी हुन्छिन । यसको बिस्तृत ब्याख्या महाभारतको युद्द पछी भीष्मपितामहले युधिष्ठिरलाई उपदेश दिने क्रममा गरेका छन्। यो लोकमा सुख सान्ति र सम्रिद्दी चाहनेले आमालाई सेवा सब्द र सम्मान वाट प्रशन्न तुल्याउनुपर्छ । जन्म दिनमा अष्ट चिरंजिविको पुजा गरि दिर्धजीवनको कामना गरिन्छ। देवीदेवताको दर्शन,प्राथना-स्तुतिगान गर्ने, दिन दुखि लाई दान दिने कार्य गरि पवित्र र आनन्दित बन्ने प्रयास गरिन्छ । सामुहिक भेटघाट गरेर खुसि बाडिन्छ, आशिर्बाद लिईन्छ र असल जीवन जिउने जीवन बिताउने दृढ संकल्प गरिन्छ। यस दिनका कार्यले बर्ष भरि उर्जा दिनेहुनाले शुभ र असल कार्यमा ध्यान दिईन्छ ।